६ कार्तिक २०७७, बिहीबार शुचि खबर	0 Comments
हङकङ प्रशासनले नेपाल एयरलाइन्सलाई दोस्रोपटक १४ दिनका लागि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्धसँगै नेपाल एयरलाइनसका जहाजले अब नोभेम्वर ४ सम्म हङकङकमा उडान गर्न पाउने छैनन्।
यसअघि पनि हङकङले नेपाल एयरलाइन्सलाई १४ दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध खुलेको चार दिन बित्न नपाउँदै पुनः हङकङले नेपाल एयरलाइन्सलाई दोस्रोपटक १४ दिनको लागि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा हङकङ गएकामध्ये ९ जना यात्रुमा बुधबार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि हङकङ प्रतिबन्ध लगाएको हो। संक्रमित ९ जनामध्ये चार जना महिला छन्। उनीहरू सबै नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाईट आरए ४०९९ बाट अक्टोबर २० का दिन हङकङ पुगेका थिए।
सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सन्स कम्युनिकेवल डिजिज् ब्रान्चका प्रमुख डा. छुयाङ शुक-क्वानले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल एयरलाइन्स माथि दोस्रोपटक १४ दिनका लागि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि असोज १९ गते नेपाल एयरलाइन्समार्फत् हङकङ गएकामध्ये ६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको पाइएपछि हङकङले दुई हप्ताको प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
विदेशबाट नेपाल र नेपालबाट विदेश जानुअघि अनिवार्य कोरोनाको ‘नेगेटिभ’ देखाउनुपर्ने भए पनि नेपालबाट हङकङ गएका यात्रुमा कोरोना सङ्क्रमण रहेको पाइएको छ। यसै कारण हङकङले नेपाल एयरलाइन्समाथि कारवाही गरेको हो।
← राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा प्रधानमन्त्री र रअ प्रमुखबीच भेटको बचाउ
‘दसैंका बेला कतै बत्ती ननिभोस्’ : मन्त्री पुन →
सं‌विधान खारेज गर्ने प्रपञ्च: डा. भट्टराई
८ जेष्ठ २०७८, शनिबार शुचि खबर	0
आठ जना वन अधिकृतलाई कारवाही सिफारिस